Asal ahaan telefoon kasta oo gacanta casriga ah qoreysa diyaariyeen ah ee ringtones kala duwan si ay u doortaan. Guud ahaan, ay yihiin noocyo kala duwan oo Gurtida dhagax weyn, kuwan raadkaygay quruun kasta, mid loo yaqaan wax sida 'calypso' (si dhab ah, kaas oo diiro dadka?) Plus si maldahan ee tinkles yeeshay in ay yihiin run ahaantii halkii ugu maqlaan. Ugu dambeyntii, waxaa jira si joogto ah giraan ah dhaqanka telefoonka ujeeddooyinka tir.
Qeybta 1: Android Phones
Qeybta 2: Apple iPhone
Ringtone waa mid ka mid ah hab u muhiimsan ee aasaaska iyo caadiga ah ee personalizing aad telefoon in aad kulanka ka wanaagsan. Sidaas, Waxaan jeclaan lahaa in aan codkayga dhigay arrintaas inay dhaheen Beecu ee track Xisbiyada, sariir iyo quraac iyo Man. Waxaan hadda ka heli MP3 ah, si kastaba ha ahaatee, sida aan u dul dhejiyeen inuu u ciyaaro mar kasta oo qof i soo waco?
Settings> Sound> taleefan soo socda: Phone Ringtone kuu ogolaanaya in aad ka doortaan doorasho ee codadka aad leedahay.
Talo: Ku kab folder ringtone Android
Kuwani waa xog music kaliya OGG, badbaadiyey in meel bannaan oo lagu kaydiyo gudaha, in nidaamka warbaahinta ringtones audio gal.
Raritaanka files music brand-cusub si folder aan run ahaantii suurtogal ah oo ku saabsan dhammaan taleefanada, oo si dhakhso ah si walba dayicin lahaa meel aad kaydinta gudaha oo dhan, si kastaba ha ahaatee, Oo ha isku dhibin, waxaa jira deegaanka ikhtiyaar ah oo ku saabsan kaarka SD oo aad u isticmaali karto: audio Media ringtones.
Mid ka mid ah laga yaabo in ay horumariyaan ringtones ah, audio, iyo sidoo kale warbaahinta folder aad iskaa; aad taas samayn karaa via laftiisa Android, isticmaalka Tababaraha file ah sida ASTRO, ama adiga oo isku xira telefoonka nidaamka kombiyuutarka aad, rakibidda card SD sida drive ah, iyo isticmaalka aad OS computer desktop in la sameeyo diiwaanka brand-cusub.
Next off, faa'ideysan MP3 in ay tani ringtones folder. Mar kale, waxaad u samayn kartaa si aad si toos ah u codsiga sida ASTRO, ama aad isticmaali karto OS nidaamka kombiyuutarka aad ee.
Si kastaba ha ahaatee, ma dhammaan qaabab audio lagu gacan. Inta badan si weyn, AAC (M4A) qaab ah in Lugood Leexin Kalimooyinka Meelahooda by default ma shaqayn doonaan Android; waa in aad loogu badalo si qaab MP3 hore (si fudud xaq-riix track ee Lugood iyo soo qaado Abuur MP3 Version).
Isla marka aad dhab ahaantii mid hawlyari iyo laxanka, ku soo laabto Settings> Sound> taleefan soo socda: Phone ringtone oo baadhaan, waayo. Waxa ay yeelan karaan magaca wadada ama faylka, ku tiirsan oo keliya sida tags ID3 waxaa loo sameeyey.
Waxaa bilaabi doonaa ciyaaro marka aad u soo qaado. Hambalyo, aad dhab ahaantii dhigay ringtone ah shakhsi!
Mid ka mid ah laga yaabo in ay mar hore isku dayay dhowr ka mid ah codsiyada badan oo caddayn si ay u horumariyaan ringtones aad iPhone. Si kastaba ha ahaatee, aad leedahay si dhab ah u badan tahay sidaas oo helay kiisas ay u noqdaan halkii aan sax ahayn ma jiro tan iyo markii ay helaan ay fayl baahan yahay iPhone iyo awgeed aan ka mid noqon kara kuwa metrik in codadka aad taxay.
Saas ma aha, waxaad u baahan tahay in aad u hagaagsan iPhone la Lugood si aad u hesho Gurtida kuwa si ay u muujiyaan kor. Farqiga mid si xeerka tani waa Garageband, taas oo dhici karta in ay dhowraan iyo ringtones on iPhone oo aan u baahan in nidaam computer kala duwan oo wax kasta.
Hab kale oo ah in dadka waawayn ay door bidaan in la shakhsiyeeyo iPhone waa doorataa audio ama habayn ciyaaray ringtone telefoonka ee. Iyadoo iPhone yimaado heerka la xamuulka ah ringtones sare oo tayo leh, oo aad intaa ka dhigi kara mid aad u gaar ah oo ka muhiimad nooc kasta oo track isticmaalka codsiyada ringtone ama iyaga iibsato dukaanka Apple ee ringtone. Inta aad dhab ahaantii helay ringtone aad dooneyso in aad isticmaasha, raran rogtid oo aad telefoonka,
Talaabada 1: From guriga Apple iPhone ee bandhigay, oo guji Settings ka. Oo Settings, tuubada u egtahay in kooxda 3aad ee kala duwan. In Dhawaaqyada, mari dhawaaqa iyo astaamaha gariir qayb ka mid ah. Inta lagu guda jiro qayb ka, raadiyo Ringtone. Taasi waxay muujinaysaa dhab ahaan waxa aad si dhab ah uga dhigin sidii aad hadda jira ringtone iPhone. Waxaa Tubada inuu bedelo in. Menu ayaa kuu waxyooday dagalka ka mid ah oo dhan ringtones ku dul bixiyey meeshii aad iPhone.
Talaabada 2: Si aad u hesho ringtones brand-cusub, ka jaftaa button Store ee ku laayeen xaq u sareeya. Tani dhab ahaan yuu idiin qaadan doonaa meel ringtone ee Store Lugood meesha aad beeciyayaasha yaabaa ringtones brand-cusub.
Talaabada 3: Waa hagaag, haddii aadan ka dooro si aad u iibsato ringtones brand-cusub, si kastaba ha ahaatee, halkii ay ka faa'iidaysan kuwa ku raran ah ee aad taleefan, ururinta hore ee xal kale ee ka qayb Ringtones ay yihiin kuwo aad soo iibsatay ka Lugood Store ama horumariyo isticmaalka mid ka badan codsiga oo dhab ahaantii synced in aad Apple iPhone.
Talaabada 4: Marka aad ka jaftaa on ringtone ah, waxaa hubaal ah si la ciyaari doonta aad dhuumaalaysi ah u dhuumaalaysiga karo oo loo ogaado haddii ay kaliya wixii aad doonayseen. Marka aad si dhab ah loo doortay ringtone aad damacsan tahay inay isticmaalaan sida aad default, si loo hubiyo waxa uu ku taxan ee ka ag. Markaas ka jaftaa button dhawaaqyada qarkii bidixda ah ee kore ama guji badhanka Home inuu ku soo laabto bandhigay guriga. Your xulashadiisa conserved goobtii.
Sidaas, hadda laga bilaabo, mar kasta taleefanka ka yimaado, ringtone aad si fudud u soo gaaray sida runta ah la ciyaari doonta (haddii aad si dhab ah u igmado ringtones gaar ah u soo wacaya, in uu yahay. Haddii mid ka mid ah leedahay, ringtones kuwa la midah ahayn). Si fudud in maanka lagu hayo in ay si wacan u dhegeysto in audio, oo aan telefoonka cunnaha ah, si aad u seegin hana ka baxay nooc kasta oo taleefan.
> Resource > Video > Sida loo beddel Ringtones on Phones Android oo iPhone